Gabar u dhalatay mareykanka oo markale ku eedeysay waalidkeeda... | Universal Somali TV
Gabar u dhalatay mareykanka oo markale ku eedeysay waalidkeeda in ay sabab u yihiin muuqaalkeeda aan wanaagsaneyn
Annabelle Jefferson, oo ah haweeney 44 jir ah oo u dhalatay dalka mareykanka ayaa ku eedeysay waalidiinta iyada dhalay in ay mas,uul ka yihiin muuqaalka xun ee jirkeeda oo sabab u noqday in ninkii sedaxaad oo ay guursato ay kala tagaan.
Gabadhaan ayaa sheegtay in arintaasi ay ku abuurtay niyad jab iyo walaac aad u baahsan oo saameyn ku yeeshay Nolosheeda.
Carmaladaan ayaa intaa raacisay in labada waalid ee dhalay iyada ay yihiin dad muuqaal xun cadaalad ayna tahay cadaalad daro in ay ubad dhalaan.
Waxay sheegtay in ay ficnaan laheyd in dowlada ay sameyso barnaamijyo lagu looga nadiifinayo magaalada dadka muuqaalka xun,ama aan loo ogolaan in ay ubad dhalaan.
Gabadhaan ayaa ugu danbeyn dacwad ku soo oogtay aabaha dhalay oo lagu magacaabo Robert Jefferson, oo jira 82,sano iyo hooyadeed oo lagu magacaabo Ruby Jefferson, 76, sano ah jirta,waxaana ay ku heysataa sababta ay u dhaleen maadama muuqaalkooda uu xun yahay.
Jefferson ayaa ku eedeysay waalidkeeda in ay sabab u yihiin in saldhigasho la,aanta guurka taasi oo keentay in foolxumo darteed loo furo.
Seygeedii ugu horeeyay ayaa waxay sheegtay markii ay kala tagayeen in garsooraha maxkamada uu u sheegay in marka uu arko wajigeeda subixii uu dareemo lalabo iyo matag,waxaana ay sheegtay in marar badan uu ku Orday musqusha.
Iyada oo sii hadleysay ayaa waxay intaa ku dartay in seygeedii ugu danbeeyay uu qabay cudurada ku dhaca indhaha balse markii uu araga u soo laabtay boqolkiiba 40 uu go,aansaday in uu furo.
Haweeneydaan 44 jirka ah ayaa wada qorshe lagu aas aasayo hey,ad ka hadasha dhibaatada ceynkani oo kale dadka ay heysato si waalidiintooda ay maxkamad ula tiigsadaan.
Ugu danbeyn waxay rajo ka muujisay in maamulka California ay soo saari doonaan mustaqbalka dhow in la soo saaro sharci looga nadiifinayo dadka aan muuqaalka wanaagsan laheyn mareykanka ama aan loo ogolaan in caruur ay dhalaan.
65,220,180 unique visits